Kedu ụzọ e si emepụta okporo ụzọ na-emepụta backlinks e-commerce?
Mgbe ọ bụla a na-emejuputa usoro nyocha ọkpụkpọ search engine na saịtị gị, ọ ga - enyere azụmahịa gị aka ka elu na saịtị nchọta ọchụchọ ma mee ka okporo ụzọ ezubere iche. Ọ na-eme search engine njikarịcha ukwuu bara uru maka weebụsaịtị ecommerce. Ọ bụrụ na ọ na-eme na mgbagwoju anya na mgbasa ozi mgbasa ozi, ahịa ahịa email, na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ, ọ na-eme ka ahịa ọ bụla n'ịntanetị baa ọgaranya.
SEO na ụdị ya nwere ike ịkewapụ ya na njedebe na peeji nke. Njikwa kachasị na-ezo aka na usoro ọ bụla nke na-arụ ọrụ iji melite ahụmịhe onye ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị - information hr system. Ọzọkwa, ọ na-enyere aka engines chọọ ịghọta ihe saịtị gị na-achọ ikwe ka ha gosi ya maka ajụjụ njiri ọrụ kwesịrị ekwesị. Ntucha njirimara nke na-eje ozi na-eje ozi iji mee ka search engines họrọ kpọmkwem ibe weebụ gị dị ka ihe kachasị mkpa na njụ ọrụ onye ọrụ. Otu akụkụ nke a sitere na backlinks. Ịkwesịrị ịnweta akara azụ dị mma site na ntanetị ndị ọzọ na-emepụta ihe iji mee ka saịtị gị dị anya nye ndị na-ege gị ntị.
A na-ekeji backlinks na okwu ha n'ime dofollow na nofollow. Dofollow backlinks bụ ndị na-eme ka gị website SEO. Njikọ ndị dị otú ahụ na-abụ ndị isi si na isi mmalite.
N'aka nke ọzọ, ala azụlinks bụ njikọ mgbe onye na-enye backlink nke na-adịghị enyefe ọ bụla uru na saịtị njikọ. Iji mee njikọ helollow, onye edemede na-achọ ịtinyekwu ihe ederede na HTML nke njikọ ahụ. Nyochaa koodu HTML, ị nwekwara ike ịkọ ma ọ bụrụ na njikọ na-eso ma ọ bụ na-agbaso. Dị ka ọmụmaatụ, nnukwu ọnụọgụ njikọ site na YouTube, Facebook, blọọgụ, na forums fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. E ka dị ukwuu maka ikike ikike gị, mana enweghị ike inye gị mmụba ọ bụla na njikwa ọrụ engine.
Olee otu esi achọpụta uru nke njikọ ndị na-abata?
E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa nke dị mkpa ka e cheta na ị chọpụta uru na mmetụta nke backlinks.
Ka anyị tụlee ụfọdụ njirimara ịchọpụta azụ azụ dị mkpa:
Njikọ ndị ọzọ sitere na saịtị dị elu bụ ndị bara uru maka nchịkọta weebụ karịa ndị na-esi site na saịtị ndị na-adịghị mkpa na ndị dị ala;
Njikọ sitere na ngalaba pụrụ iche na-eweta uru dị ukwuu na saịtị gị karịa njikọ sitere na saịtị ndị jikọtara gị na mbụ;
A nabatara ndị ọrụ dị mma karịa ndị na-abaghị uru na isiokwu ndị ahụ;
Njikọ na akụkụ ihe odide dị mkpa na nke kachasị mma na-etinyekwu mkpụrụokwu bara uru dị mkpa, karịsịa ma ọ bụrụ na ha dị ka aha aha gị.
Olee otú ịmepụta azụlinks na-azụlite okporo ụzọ?
Mepụta ihe ntanetị nke ndị ọrụ ga-ekerịta
Ụzọ kachasị mfe iji nweta ngwaahịa azụmaahịa na ebe ị na-azụ ahịa bụ iji mepụta ọdịnaya dị ukwuu na nke dị egwu edere, vidiyo ma ọ bụ ọdịyo ọdịyo nke ndị ọrụ ga-ekerịta site na ọchịchọ ha.
Mepụta nyochaa ngwaahịa gị
Ngwakọta ụlọ ọrụ ọzọ dị mfe ma bara uru bụ iji ruo ndị na-ede blọgụ iji mepụta nyocha dị mma nke ngwaahịa gị. Ọ ga-eme ka a jikọta ya na saịtị gị.